Mapaki enhandaro padhuze neni | 35 Akanakisa theme Parks Yevana muUK
Mapaki eVaraidzo Ari Pedyo neni | 35 Akanakisa theme Parks Yevana muUK
By Chrisking September 16, 2021 famba 0 Comments
- Mapaki Ekuvaraidza Ari Pedyo neni -
Nemazororo echikoro ava kusvika, mhuri dzichatsvaga pekuzorora. Saka isu takanyora runyorwa rwemapaki edu epamoyo evadiki uye vechidiki pamoyo kuti vafare.
Nekudaro, mamwe mapaki emusoro anonyatso simira nzvimbo dzinopa dzakasiyana siyana dzezvinokwezva zvakanangwa kuvana vadiki vane hushingi hushoma uye kusasimba kushoma.
Paki yevaraidzo ichave inzvimbo yakanaka yekuenda kuti vana vako vade imwe yemhepo yakavakwa. Roller coasters pamahombekombe egungwa uye kumonyorora masiraidhi anopa mufaro mukuru kuvana vakuru.
Isu tiri vana vakuru pamoyo, saka tinoda kuenda kumapaki ezvinyorwa, asi tiine mwana. Nekuda kwemubhadharo wematikiti, enda kupaki yemusoro pamwe nekireshi dzimwe nguva haina musoro.
Misoro yemapaki yakanaka kune yemhuri-yakazadzwa zuva remhuri kunze, asi ivo havawanzo kukwana kana iwe uine vana vadiki vasina kukura zvakakwana zvekukwira.
Uyezve kune anonakidza rollercoasters, ayo anogona kuve anozivikanwa nevachiri kuyaruka uye vana vakuru asi anotyisa zvakanyanya kuvana vadiki - uye kunyangwe kana vakashinga zvakakwana, vangangotadza kukwira kana vasina kureba zvakakwana.
Nhau dzakanaka ndedzekuti dingindira mapaki akacherekedza uye ari kugadzirisa kuitira vana vadiki uye vana vadiki, pamwe nekubatanidza zvimwe zvinhu kuti mapaki awedzere kunakira vana.
Tiri kutaura nezve dzakatarwa nzvimbo, zvidiki-zvinoshamisira zvinokwezva zvevana, uye zvakapfava nzvimbo dzekutamba kwavanogona kupfuudza nguva.
Kune akatiwandei epaki dzepakukurumbira dzeUK dzakakodzera kuvana vadiki uye vana vadiki, zvichivaita vakanakira mhuri yenyu inotevera kubuda.
35 Mapaki Ekuvaraidza Akanakisa Ari Pedyo neni muUK kuenda kuVana
Pazasi pane mamwe ePaki dzeKuvaraidza Ari Pedyo neni:
Iyi ndiyo imwe yemapaki evaraidzo padhuze neni.
Peppa Nguruve Nyika aya mazwi matatu anoshamisa kuvabereki.
Zvakare, Peppa Nguruve Big Balloon Ride, Miss Rabbit's Helicopter Flight, uye George's Dinosaur Adventure Ride ndevamwe vevanomwe vatasva paPaultons Park yakapihwa mascot evana vane mukurumbira.
Pasina kutaura kuwedzerwa kwevamwe vaviri vatasvi gore rapfuura, isu takaongorora pano.
Kune zvakare yakawanda miba yekusangana-uye-kukwazisa mikana yeadiki ekuti vatandane neavanofarira mavara, pamwe neapo-saiti yekutengesa shopu kana iwe uchida kuvabata kune chiyeuchidzo chezuva racho.
Kugamuchirwa kwemusoro wepaki kunosanganisira Peppa Nguruve Nyika, uye mumwewo saizvozvowo akatarisa kuzere kwepaki kune vana vadiki.
The Alton Towers iri imba yezvimwe zvinokwezva zvakaipisisa pasi rose, kusanganisira yekutanga 14 loop rollercoaster uye yepasirose yekutanga kudonha kudonha, uye iri chokwadi chekutyisidzira kunyangwe vanonetsa vanotsvaga mafaro.
Inogadzirirawo vana nekuimba nekutamba CBeebies Land, iyo inokwira gumi nemana, maratidziro akasiyana ehupenyu, uye hotera yakabatana.
ichi chivaraidzo Park, inozivikanwa pakati pevashanyi kunzvimbo yekumahombekombe yeBlackpool, inoratidzira zvinokwezva zvakaita seNickelodeon Land pamwe neakakura rollercoasters senge The Big One uye ICON, yekutanga UK-yekutanga-rollercoaster iyo inosimudzira vatasvi kuenda kumatunhu e88.5ft.
The Flambards iri muHelston, Cornwall, paka-yakanaka theme theme. Zvakare, kukwira kwetsika kweFerdi's Funland, senge teacups, space shuttles, uye Pirates, vanozodiwa nemhuri dzine zvidiki.
Vateveri veDinosaur vanogona zvakare kuongorora Jurassic Rwendo dinosaurs, kufumura zvisaririra muDino Dig, kana kuona vatsva vaDino-Nursey. Iyo Western Chitima: zvimwe nyowani zve2021 - svetukira pabhodhi!
5. Huru Gwai – Devon
Makwai Makuru izuva rakanaka kwazvo muDevon yevana zvisinei nemamiriro ekunze! Kune vana vakura, kune ma roller coasters pamwe nemitambo gumi nembiri uye inoshamisa nzvimbo dzekunze dzekunze, iine mahombekombe makuru ekusvetuka, kukwira kwakakombama, nenzvimbo dzekutora.
Vana vadiki vari kuenda kunonamata Piggy Pull-Along, Tractor Safari, matarakita ivo pachavo, mapikicha, uye pedalos!
The Legoland izuva rekuzorora remhuri kunze kwevechidiki vari pasi pegumi nemaviri vane zviitiko zvakawanda zvemhuri yese.
Kunyepedzera kuva hofori uchingofamba-famba nepakati penyika dzeMini, nunura nyaya dzako dzaunodisisa kuFairy Tale Brook, kana kuti uzviise pamadragoni-themed rollercoasters uye zvinokwezva.
Kune chimwe chinhu chakakosha, bhuku kugara husiku kuLegoland Resort Hotel kana Castle Hotel, iyo inopa akasiyana siyana ezvekuvaraidza mhenyu, pekugara pakatarisana, uye zvakanakira kubvumidzwa kwekutanga kwepaki.
Kune imwe yega Chikamu Chekuchengetwa kweVanaamai nanababa vane vana vachangoberekwa kwavanogona kuyamwisa, chikafu chemumabhodhoro, kana kuchinja manapukeni.
Zvinhu zvekuita muNashville
Zvinhu zvekuita muCalifornia
Kunakidzwa Mabasa muHouston Yevakuru
The Diggerland ndiyo yakanyanya yepamusoro adventure paki ruzivo mune iyo vana nevakuru vanowana mukana wekukwira, kushanda, uye kutyaira CHAIYO vanochera, marara, uye mimwe michina. Nezuva rakakura-rekufamba kwezuva kunze, shanyira Diggerland kana iwe ukachera iyo!
The Sandcastle Waterpark ndiyo yakanaka yemumba yekutamba yevana vanoda mvura, chinhu chakakosha pamabasa emhuri yeBlackpool.
Zvakare, Sandcastle inopa kunakidzwa, kunakidzwa kwenhengo yega yega yemhuri, izere nemadziva ekushambira emasaisai uye masiraidhi, inowirirana yemitambo yekutamba, uye yevashanyi vakura, machena-knuckle mafaro emahombekombe.
9. Mapaki Ekuvaraidza Ari Pedyo neni: Lemur Landings
Lemur Landings iri pakati pevaraidzo chivakwa kuchamhembe kwePoole neBournemouth uye inopa vana zuva risingafadzi remitambo yakapfava yemukati.
Kune yakasarudzika yakadzika-tambo kosi yevana uye iyo LED madziro iyo inobvumira vasingatyi vanokwira kuti vateerere kune nyaya uye kugadzirisa mapuzzle, mirwi yemasiraidhi, tunnels, uye bhora mapango, uye yakanyarara coloring zone.
The Benzi Farm inzvimbo yekushanya uye zoo mudunhu rePembrokeshire - uye izuva rakanaka kune vana vane 50 muzana yezvinhu uye zviitiko zvinovhurwa kunyangwe kuchinaya!
Zvakawanda zvinokwezva zvinosanganisira Vintage Funfair, iyo purazi, iyo zoo, kana inoshamisa yemukati neyekunze nzvimbo dzekutamba dzevana paFolly Farm.
Dingindira mapaki e Gulliver yakanyatsogadzirirwa mhuri, zvinoreva kuti vanofananidza kushanya kwese uye kukwezva kwevana vadiki.
Muchokwadi, hapana vana vanoperekedza havatenderwe mupaki yemapoka evakuru kana vakuru vega. Gulliver's World Warrington, Humambo hweGulliver Bath Matlock kana Milton Keynes Gulliver Nyika
Kune ma rollercoasters, kukwira kwemvura, nzvimbo dzinosaswa, matanda - zvese izvo vana vakuru vanogona kunakidzwa nazvo mune mamwe mapaki enhetembo, ndivo vechidiki vane mufaro wese panguva ino.
Zvidiki kwazvo kumisidzana yanhasi? Nzvimbo dzemukati nekunze dzakawanda uye dzinogona kunakidzwa.
12. Iyo Milky Way Adventure Park
Iyo Milky Way Adventure Park ndiyo inodiwa yemhuri dzechidiki munharaunda yeClovelly, North Devon.
Zvakare, paki yacho zvakare inopa maratidziro ehupenyu, imba yekutamba yakapfava yepasi pemashanu, pamwe neMilky Way Railway, pamwe nekushanya uye zvinokwezva zvakaita seCosmic Typhoon, nzvimbo yedombo, uye Time Warp.
13. Sunown Adventureland
The Sundown Adventureland ipaki yemusoro yakagadzirirwa vana vari pasi pemakore gumi, iine musanganiswa wezviitwa zvemumba, kutasva kwepaki yemusoro, uye nhandare dzekunze dzekunze.
Bvumira vana vako kumhanya musango pane guru rekunze rejecha, kushanyira imba yekutanga yekuimba peturu, kana kukwira mudenga kumisana kwevamwe Giddy Piggies.
14. Thomas Land paDrayton Manor
The Thomas Land kuDrayton Manor inoratidzira anopfuura makumi maviri nemashanu kukwira uye zviitiko zvevateveri veChitsuwa cheSodor kuti vafarire. Shanyira Bertie Bus, tora Harold's Helicopter Tour, kana kuona Cranky's, Tower Drop.
Vana vadiki vari kutsvaga chinakidzo vanogona kunakidzwa nekukwira Matraki Anonetsa pane yavo yekutanga rollercoaster. PaTerence's Driving School, vanogona zvakare kuenda paRocking Bullstrode kana kudzidza kudzidzira matirakita.
Iko hakuna kushomeka kwezviitiko zvemhuri yese mu Crealy Adventure Park & ​​Resort Yakazara nekutasva kunonakidza, kuwanda kwenzvimbo dzekutamba dzemukati, makonati ehupenyu, uye Buddy Bear Kingdom.
16.Blackpool Pleasure Beach
Kubva pane yakakurumbira Huru kune iyo ichangovhura-Icon, Blackpool Kunakidzwa Gungwa ine mamwe anonakidza chaizvo ma rollercoasters.
Kune vana vadiki uye vana vadiki, zvakadaro, Nickelodeon Land ndiyo nzvimbo yekuenda. Sangana naChase naMarshall kubva kuPaW Patrol, Spongebob Square Pants naPatrick, kana Dora the Explorer sezvavanotsvaga nyika nyowani.
Vana vari pasi pemakore maviri vachapihwa yemahara Pleasure Beach Pass kuti vapinde mupaki, iyo inosanganisira zvinokwezva zvakaita seChinese Puzzle Maze, Pleasure Beach Express, uye Bindu rekudzidza raBradley & Bella.
17. Sunown Adventureland
Iyo Sundown Adventureland muRetford inzvimbo huru yezuva remhuri rinonakidza kunze. Zvakare, Angry Birds Activity Park, Rocky Mountain Railroad, uye dzakasiyana siyana dzevamwe vatasvi zvese zvakagadzirirwa kunyanya kuvana vari pasi pemakore gumi.
18. Chessington Nyika yeAdventures
At Chessington Nyika yeAdventures, pane 18 kutasva kwevana, kusanganisira iyo nyowani Gruffalo Rwizi Ride Rwendo, kwaunogona kuperekedza Mouse parwendo runonakidza rwechikepe nerwizi rwakadzika rwerima.
Kune zvakare zviripo zviitiko, pamwe neinozivikanwa Chessington Zoo uye Sea Life Center.
19. Tambai Factore, Manchester
The Tamba Factore ndiyo nzvimbo huru yekutamba yeUK yemukati uye inogara muBeyond Center inoshamisa (pamusoro pemugwagwa kubva kuTrafford Center).
Mutambo weFactore unoratidzira zvese zviri pasi peimwe denga, kusanganisira zipline, nhandare yemukati yebhora, nzvimbo ine nhanho yemitambo yekutamba, uye nharaunda yakasarudzika yekudyidzana.
Kumhanyisana nemhuri yako pane ino ipfupi asi inonakidza kosi pane yemukati go-kart track. Pane imwe kart, vana nevakuru vanogona kutomhanya pamwe chete!
Iyi pirate-themed yemukati mepaki yemvura inogona kukwezva kunyangwe muridzi wembareshi akatsiga kuti adzokere kune zvimwe.
Calypso Cove yakanaka kune ese marudzi ese evanoshambira, pamwe nekubatanidzwa kwemadziva uye masiraidhi (kusanganisira mudiki-ane hushamwari anopindirana splash zone), uye nzvimbo yekudyira yepahombekombe inobatsira kufudza nekugara chero munhu asingade kunyorova.
Mushini wekuzunguzirwa munzvimbo huru yeCalypso Cove inofanirwa-kuona yemhuri yese.
The Landmark Sango Rinoyevedza Park, iri mumoyo weCairngorms National Park, inokwezva mhuri dzichitsvaga zuva rakazara-chiitiko.
Zvakare, pane zvakawanda zvekuti vana nevakuru vafarire, kubva kuWild Water Coaster kuenda kune Skydive chiitiko uye iyo Tarzan Trail.
The Flamingo Nyika inogona kunge isingaonekwe pane runyorwa rwemapaki epamusoro muUK, asi usatsauswe nezita - paki ine zvakawanda zvekupa kupfuura shiri chete.
Kune shumba, tiger, uye mbongoro pakati pezvisikwa zvakawanda zvemusango pano, asi huwandu hwevatasvi hunoshamisa. Tichifunga nezvekukwira kwemhuri, kune zvekare zviitiko zvakanyanyisa kune vakashinga, senge Velocity, iyo inobvumidza iwe kukwikwidza superbikes.
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu zvishoma sedate, pane iyo Peter Rabbit Rwendo, kwaunogona kutomhanya mhiri kwaPeter naLily!
Akashandisa Midziyo Pedyo Neni
PPP Chikwereti uye Kushaya Basa
Zvinhu zvekuita muBig Bear
23. Mapaki eVaraidzo Ari Pedyo neni: M & D's
M & D's, YeScotland inofarira theme paki, ingadai isipo kubva kune chero chinzvimbo chemapaki makuru eUK.
Kukwezva uku, kuri muStrathclyde Country Park inoyevedza, zvinoshamisa chero mamiriro ekunze - kana isina kunaka kunze, tora mukana wekutamba kwakapfava uye yekutanga Scotland yemukati Tropical Rainforest.
24.Brighton Palace Pier
Sanganisa rwendo kuenda kumahombekombe nekumira pa Brighton Palace Pier, iyo inopa akasiyana siyana emhuri-ane hushamwari zviitiko senge arcade mitambo uye zvakajairika nzvimbo dzepasirese kukwira.
Brighton inzvimbo inonakidza yekushanyira gore rese, saka wadii kuyedza zvimwe zviitiko?
Mvura yeMvura yaStoke inonakidza inodziya paki muMidlands! Iyo ndiyo nzira kwayo yekuvimbisa zuva remhuri yako kubuda kunoita kupenya, uine makumi matatu kukwira nemitambo, nzvimbo dzemukati nekunze, uye mamirioni emamiriyoni emvura (zvakanyanya!).
Kubva pahyper-spinning Space Bowl kuenda kuBlack Hole, iyo inokutora iwe pasi murima, nhengo dzemhuri dzisingatyi dzinogona kunakidzwa nemuchena-knuckle mafaro pane akasiyana masiraidhi.
Pasina kutaura iyo Nucleus, Waterworld yekutanga Water Rollercoaster ine 375 tsoka dzematambudziko - une hushingi zvakakwana?
Gadzira mutsetse wemapuru emukati kana epanze, kana iyo Razy Ride Ride, iyo inowanikwa mwaka, kana iwe uchitsvaga nzvimbo yakanaka yekuzorora nekusununguka.
Iyo inonakidza yemhuri inofara chero mamiriro ekunze, kusanganisira rapids, masaisai madziva, uye nzira yekurwisa mvura!
Iko hakuna nzvimbo irinani yekuratidza vana vako kune zvinofadza zvekukwira kwemvura pane pano! Daredevils ako ari kungo gwinyisa kuti aregedzwe.
The Coral Reef Bracknell Emvura Nyika yadzoka uye zvirinani kupfuura nakare kose mushure mekukura kukuru, kusazvikudza kwete imwe chete, kwete maviri, asi mashanu anodonhedza mvura. Iwe unofunga kuti bhendi rako rembwa dzemunyu dzine munyu zvine zvazvinotora kutora paCanon?
Gadzirira kukwenyerwa pasi pasi pemamita makumi matanhatu nenomwe pakumhanya kwakanyanya! Mhuri dzine vana vari pasi pemakore mashanu dzinogona kukwasva dzichipfuura ngarava yepirate, dhadha pasi pemakoni emvura, uye dzinozorora muDziva reVadiki veCorals kune rimwe divi.
Ivo vakasikwa vaine yakawanda nzvimbo yekuti vako vadiki vatambe. Vatasvi vanogona kugadzirwa. Nezviratidziro zvakasiyana-siyana zvekurira uye mheni yekupenya, iyo Dutu Chaser inodzokorodza kunakidzwa kwegungwa rakavhurika uye inoita kuti mumwe nemumwe mutsva wengarava asarudze rwendo rwavo.
Ndekupi kumwe kwawaizowana makava, zvisaririra zveAztec, uye nemakomo enzizi? Kune zvakare imwe yemapaki makuru emvura emukati muBritain, ane anopfuura 18 kukwira uye zvinokwezva.
Sandcastle inoratidza iyo Water Park. Wera tembere yeAztec Falls kuti ikuunze kurima uye / kana kumhanyira kuzasi kwemasiraidhi maviri eshato, uko kudonha kunotyisa kuchaburutsa zvisikwa zvemunhu anokunda!
Iyo paki yese inosvikika newiricheya uye iwe unogona kutora vanoshambira kune yakadzikama shimmering isina kudzika kekutanga.
28. Iyo LC Swansea, Glamorgan, uye Cardiff
Shingirira gumi paThe LC Swansea, uko masiraidhi, chamupupuri, nenzvimbo yemitambo ine nhurikidzwa ina zvinopfuura chete neyavo yekushambadzira simulator.
Mushure mekupa ngowani yekuchengetedza, vana vanogona kusungira bhiza ravo rakatendeka, vanodaidzwa kunzi surfboard, uye kuyedza kukwira mhepo ine simba yemafungu.
Zvichienderana nehunyanzvi hwavo, vanogona kuchovha padumbu ravo kana kumira vakamira uye kufefetera kunge chaicho-hupenyu hwegungwa bhuru; zvakanyanya kuoma kupfuura zvinoonekwa asi zvinonakidza kwazvo.
Zvino pane simbe yerwizi inotsvedza, muchina wekuzunguzira, uye maze yemumvura izere nemabhiriji uye makomba ebhora evadiki.
Iyo surfboard simulator inofanirwa kuve yakanakira iyo. Mushure mekurova mapaki emvura mazhinji emukati muUK - ayo aive mazhinji.
29. Dunes Splash Nyika, Merseyside
Dunes Kupararira Nyika pamahombekombe eMerseyside anokuendesa kunzvimbo dzinopisa. Kune mana maruva ane akasiyana siyana nhanho, senge Speed ​​Freak Flume Ride.
Ndiyo nhamba inokurumidza chaizvo, sezita zvarinoreva, iyo inopinza mutasvi kuburikidza nemakona apo ichivavarira kutyora rekodhi. Mhuri Inofara Flume Ride ine hunyoro, iine mwenje-up show uye netipi yakaipa yekukwira nayo.
Zviduku zvidiki zvinogona kutora chidzidzo chekushambira kana mabhureti emvura mudziva rekucheresa - ingo rangarira kusvika kumusoro mashanu Murtle iyo Turtle, uyo anowanzoonekwa achitora.
Izvo zvakanaka kune avo 'Quiet Night' zvikamu. Chikwata cheAiming High chakavagadzirira vana uye vechidiki vane hurema.
Rwendo rwe Bhuruu Lagoon Mvura Paka muWales inokutakura kuenda kunzvimbo yekuWales. Pamwe chete nemaruva, mamiriro acho anopa akasiyana siyana chaizvo zvinhu, senge inozivikanwa dziva remafungu ane matanhatu akasarudzika mafungu emagetsi uye magiriza ari kufashaira pasi pemvura.
Ivo vakatogadzira yemahombekombe emukati iyo isina kufanana nechinhu chero chaunowana muUK, isina tsvina munzvimbo dzese nekona.
Mhedzisiro! Shanyira makungwa manomwe neakavhurika-pamusoro kukwira paMapopoma, iyo inomira kunze kwechimiro kwenguva pfupi usati wadzokororazve uye uchikukandira mudziva rekudonha!
Izvo zvakanakisa zvehunhu hwayo hwezvakatipoteredza. Mvura inopisa zvachose nebiomass fuel, uye inonzi ndiyo chete paki yemvura yeUK.
The Leyton Leisure Lagoon. Kana iwe uchinzwa inguva yekurapa yako mhuri kune risingakanganwike zuva, hapana chinonakidza kupfuura kushanya imwe yemapaki makuru eBritain!
Zuva repaki theme rinonakidza kune wese munhu, kubva pamifaro mikuru kune madiki macasters.
Zvakare, kusarudzwa kwedu kwepaki dzakanakisa dzemapaki eBritain kunopa zvinopfuura kungoita coasters - kunakidzwa kwemvura, mhuka dzekunze, uye kukwira kwechitima anongova mavambo.
32. Nyika yeVapenyu Dinosaurs, Worcestershire
West Midland Safari Park inokudzosera iwe munguva ku Nyika yeVapenyu Dinosaurs. Iwe uchazosangana nemhando dzakasiyana dzeanopora dinosaurs uye usarasikirwe nemukana wekuchera zviwanikwa zvako kuDino Dig.
33. Iyo National ShowCaves Center yeWales
Iyo National ShowCaves Center yeWales, ine anopfuura mazana maviri nemakumi maviri nemaviri ehupenyu hwehukuru hwehupenyu, inofanirwa kunge iri munzira yako yezuva rinotyisa kunze. Iwe uchave uine hushingi hwekutora inotyisa T-Rex?
Kunyangwe iwe uchida yepamusoro-octane mafaro kana kusarudza kutora zviri nyore, Lagan Valley LeisurePlex ine chimwe chinhu kune wese munhu.
Kubva pane adrenaline-kupomba inomhanyisa masiraidhi emvura kune rwizi runosvinura uye mapopoma akanaka ekushambidza pasi, iyi inoshamisa yemukati yemvura paki ine zvese. Kune zvakare chikamu chakatsaurwa chevana chine zvakawanda zviitiko. Kuwana kwakadii!
The paki mabhiri pachawo se "rudzi rwekunakidzwa" rwenyika, uye hazvisi zvekushaya moyo. Zvakare, "utatu husiri hutsvene" hwevatasvi vanosanganisira Stealth, imwe yeanokurumidza roller rollercoasters pa0-80mph mukati memasekondi maviri; Colossus, wekutanga-kusunungura rollercoaster yepasi; uye iyo 10 G-simba reNemesis Inferno.
Uchiri mupenyu here? Kune avo gumi nevaviri zvichikwira, pane Saw-Iyo Ride, inodonhedza yakatwasuka kudonha, uye Saw Alive, inorarama inotyisa maze yakavakirwa pane anotyisa maflick.
Verizon Zvitoro Pedyo neni
Zvinhu zvekuita muColumbia, SC
Zvakanakisisa Tenga Pedyo neni
Misoro yemapaki nenzvimbo dzekutamba dzevana vadiki zvakawandisa muEngland, nezvose kubva kumakomba ebhora uye madziva emasaisai kusvika kujecha uye kufara-kutenderera. Heano mashoma atinofunga kuti vana vako vachada! Iyo hombe theme paki muUnited Kingdom.
Kune zvakawanda zvinofadza zvevana vakuru, kusanganisira Oblivion yakadzika yakadzika kudonha uye Mhepo inopeperetswa nemhepo, pamwe neve pre-vechidiki vanofarira seCongo River Rapids. Vadiki, zvakadaro, vane yavo Cloud Cuckoo Land. Zvimwe zvinokwezva zvinosanganisira Sea Life Center uye yakanaka paki yemvura.
Unoda runyorwa rwedu rweakanakisa Mapaki eVaraidzo Ari Pedyo neni asi vana vako vachiri vadiki kune vamwe vatasvi? Shanyira imwe ye pamusoro theme mapaki evana pano.
Ndokumbira usiye chirevo, senge ino chinyorwa paPaki dzeKuvaraidza Pedyo neni. Zvakare, usakanganwa kuudza shamwari dzako uye mhuri nezvazvo!
Tags:yakanakisa theme paki yemakore mashanu ekuberekwa uk, yakanakisa theme paki yemakore manomwe ekuberekwa, yakanakisa theme paki yemakore masere ekuberekwa uk, gulliver theme theme paki, kunze kwekunakidzwa mapaki uk, madiki theme mapaki, dingindira mapaki evamakore maviri ekuberekwa uk, mudiki theme theme mapaki padhuze neni
Kiredhiti kadhi reUS kune vasiri-vagari uye Nyowani Vatorwa
13 Anoshamisa uye Anotyisa Vana Zviitiko Pedyo neni muZurich
Tevera Mahombekombe Ari Pedyo neni uye 25 Akanakisa Ekutevera Mahombekombe muLos Angeles
Akanakisa Workout Zvipfeko zveVarume uye Epamusoro Anoshanda Anopfeka Zvipfeko
Best Rap Albums dze All Time uye 13 Best Kanye West Albums
Yakanakisa kumeso Kushambidza Kwevarume Neinoshamisa Unhu uye Mabasa
Mahotera Akanakisa muRome Chikafu, Pizza uye Zvimwe Zvikafu zveVegan
Miti inotonhorera Kwazvo Kupoterera Nyika uye Izvo Zvinoshamisa Zvimiro